Usenkingeni owathuka umsakazi woKhozi FM
ANGENILE amanzi endlini kuWelile Mchunu oboshelwe icala lokuthuka umsakazi woKhozi FM uZimdollar ngesikhathi bebanga indaba yengoma yonyaka. Isithombe : FACEBOOK/WELILE MCHUNU
KHETHA SANGWENI | February 10, 2020
USHAQWE ngamaphoyisa amphonsa esitokisini kwaba muncu umlandeli oqavile weGcokama Elisha. UWelile Mchunu usolwa ngokuthuka umsakazi woKhozi FM uZimiphi ‘’ Zimdollar’’ Biyela.
UWelile, uboshwe ekubo eMtubatuba ngoLwesine ntambama engazelele lutho, waze waphuma ngoLwesihlanu. Indaba isukela ekutheni uWelile wafaka ama-video kwiFacebook eshiya angalazi kuZimdollar emsola ngokwedelela amabhinca avotela ingoma yonyaka.
UZimdollar waziqhwandela ulaka encokola ngembedumehlwane yokuvalwa kwengoma yonyaka eyenzeka emsakazweni. Kuthiwa uWelile ubhekene necala lokwehlisa isithunzi. UZimdollar wakhuluma emoyeni ethi abantu abavote ngezihlanu abayeke ukukhuluma kakhulu. Kulapho-ke acasula khona amabhinca kwase kulandela i-video kaWelile eshiya angalazi.
Emuva kwalokho uZimdollar nomyeni wakhe UMfishimfishi Dlamini bathathela uWelile izinyathelo zomthetho ngokubahlambalaza.
Abaningi bazomkhumbula uWelile njengoba eke waba wumlandeli kaKhuzani ovuthayo kodwa wamlaxaza njengoba esesha amashushu ngeGcokama Elisha.
UWelile ethintwa ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa afikile amthatha kubo wathi udaba lusezandleni zabameli bakhe. Uthe izitha zakhe zisizakele ngendaba yakhe namaphoyisa zisabalalisa into engekho.
“Ngithathwe ngoLwesine ngabuya izolo. Okungiphatha kabuhlungu uZimdollar usegiya ngami emsakazweni, uthi ungumshayi wedushu aliphonse esitokisini, yini yonke le nto ayishoyo? Nginabameli nami yibona asebezongikhulumela manje,’’ kuthetha uWelile ezwakala ukuthi udiniwe.
Nebala uZimdollar uzwakele ohlelweni iSigiya Ngengoma ebhuqa, ezibonga kanjalo waze wancokolisa uzakwabo uTshatha ethi uzomphonsa esitokisini, kuzwakala nje ukuthi lolu daba lumthinta kwamancane.
UZimdollar ethintwa ngalolu daba akalubambanga ucingo kwale ngisho esethunyelelwa imiqhafazo wangayiphendula.
Umyeni wakhe uMfishimfishi uthe ucela ukubuye ashayelwe ucingo usematasa nomsebenzi. Emuva kwalokho akabange esalubamba ucingo izikhathi eziningi ezanywa.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uKapteni Nqobile Gwala uthe kunzima ukuqinisekisa ngoba akucacai ukuthi icala livulwe kusiphi isiteshi nini futhi.
Igcokama Elisha lisolwa ngokukhulelisa umkamuntu
'Udlwengule' udadewabo emkhokhisa ngomdlalo
Ukhale ngesibhaxu ebopha umyeni uSthandwa Nzuza
OwaKwaNongoma uzohlonishwa ngezobudokotela
Imikokotelo yemiyezane yehlisa isithunzi